အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုရေးမလဲအပိုင်း-၁ (စာရေးခြင်းအစီအစဉ်) - Myanmar Network
Posted by AungKoU (UMK) on December 2, 2012 at 21:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စာရေးခြင်းသည် အလွန်သိမ်မွေ့ နက်ရှိုင်းသောအနုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ စာတစ်ပုဒ် မရေးမီရေးမည့် အကြောင်းအရာကိုဦးစွာစဉ်းစားရပါမည်၊ ၎င်းအကြောင်းအရာအပေါ်မူတည်၍ ဖော်ပြမည့် ပုံစံကိုရွေးချယ်ရပါမည်။ဖွင့်ဆိုပြအရေးအသား၊ သရုပ်ဖော်အရေးအသား၊ နှိုင်းယှဉ်ပြအရေးအသား၊ ကျိုးကြောင်းပြအရေးအသား၊ဇာတ်ကြောင်းပြောအရေးအသား(ပြန်လည်ပြောပြသည့်ပုံစံ)အစရှိသည့် စာရေးနည်းပုံစံများအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ စာရေးရာတွင် မရေးမီကြိုတင်စဉ်းစားခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း နှင့် ပုံနှိပ်ခြင်း(သို့) တင်ပြခြင်းစသည့် အချက် ၄ ချက်ကိုအစဉ်လိုက် အဆင့်ဆင့် စနစ်တကျဆောင်ရွတ်ရပါမည်။ စာပိုဒ်တစ်ခုတွင်အဓိကဖော်ပြလိုသည့် အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်၊ ခေါင်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့ဖော်ပြပေးမည့် အကြောင်းအရာအသေးစိတ် နှင့် အဆုံးသတ်နိဂုံးများကိုစာဖတ်သူလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်စေရန် စနစ်တကျရေးသားဖော်ပြနိုင်ရပါမည်။
စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုစတင်မရေးသားမီရေးသားမည့် အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍စဉ်းစားကာစုစည်းပါ၊ မရေးသားမီ ကြိုတင်စဉ်းစားရာတွင် အဆင့်(၅)ဆင့်ခွဲကာလေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
(၂) ရေးသားမည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ
(၄) စာပုဒ်တွင် အဓိကပြောလိုသည့် ကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ပါ
(၅) အဓိကအကြောင်းအရာကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေမည့် အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ
စာပိုဒ်ကိုစတင်ရေးသားခြင်းသည် မိမိတင်ပြလိုသောအယူအဆကိုဝါကျ(စာကြောင်း)များအဖြစ် ပြောင်းလဲရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသားစဉ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် အဆင့်(၅) ဆင့် ရှိပါသည်။
(၁) စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် ရေးပါက file ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
(၂) နိဒါန်း၊ စာကိုယ်၊ နိဂုံးတို့ကိုအစဉ်လိုက်ချရေးပါ (၎င်းတို့ကိုရေးသားစဉ်တွင် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သောအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ကိုသတိထားရေးသားပါ)
(၃) ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ် ပေါ်လွင်စေရန် ရှင်းလင်းသောဝါကျ ပုံစံများကိုအသုံးပြုပါ
(၄) အဓိကအကြောင်းအရာကိုစာဖတ်သူသဘောပေါက်နားလည်စေရန် အာရုံစိုက်ပါ
(၅) မိမိ၏တင်ပြချက်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်သည့် စာသားများထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် အဘိဓာန်ကိုအကူအညီယူပါ
တည်းဖြတ်ခြင်းအဆင့်တွင် မိမိရေးသားထားသောစာပိုဒ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးကာလိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ အထူးသဖြင့် သဒ္ဒါ (Grammar)၊စာလုံးပေါင်း(Spelling) အမှားများကိုသတိထားစစ်ဆေးပြင်ဆင်ရမည်။
(၁) စာလုံးပေါင်း(spelling) ကိုစစ်ဆေးပါ (စာလုံးပေါင်းအမှားများသည် ဆိုလိုရင်းနှင့် လုံးဝလွဲချော်သွားပါလိမ့်မည်။)
(၂) သဒ္ဒါ (Grammar) ကိုစစ်ဆေးပါ (ပြောစကား Spoken English တွင် သဒ္ဒါမကိုက်ညီသည်များရှိတတ်သော်လည်းစာရေးသားရန်တွင် သဒ္ဒါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရပါမည်။)
(၃) စာပိုဒ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လည်ဖတ်ရှုပါ
(၄) ကတ္တား(subject) နှင့် ကြိယာ(verb) ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေးပါ (ဥပမာ- subject အနည်းတွင် verb ကို 's/es'ပေါင်းထည့်ရမည် သိသော်လည်းရေးသားရာတွင် he come. ဟု 's/es'ကျန်လေ့ ရှိပါသည်။)
(၅) ရေးသားထားသည့် Tense (ကာလ) နှင့် verb (ကြိယာ) ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေးပါ
(၆) ရေးသားထားသောဝါကျ တစ်ကြောင်းစီသည် ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ် ပေါ်လွင်မှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေးပါ
(၇) ရေးသားထားသောစာပိုဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်း/မကောင်း ကြည့်ပါ
သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးပို့ တင်ပြရန် အတွက် ရေးသားထားသောစာပိုဒ်ကိုနောက်ဆုံးအပြီးသတ်ရန်အတွက် အဆင့်(၃) ဆင့်ရှိပါသည်။
(၁) ဆရာ(သို့မဟုတ်) စစ်ဆေးမည့်သူထံတင်ပြပါ
(၁) ၎င်းတို့ထံ မှ အရေးအသားတိုးတက်အောင် မည်သို့ ဆောင်ရွတ်ရမည်ကိုအကြံဉာဏ် ရယူပါ
မည်သည့် ကိစ္စတွင် မဆိုမဆောင်ရွတ်မီ၊ ဆောင်ရွတ်ဆဲ၊ ဆောင်ရွတ်ပြီးအခြေအနေများနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုစနစ်တကျ ပြုလုပ်နိုင်မှသာလျှင် ပြည့်စုံသောလက်ရာကောင်း (ဝါ) အလုပ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ စာရေးသားရာတွင် အထောက်အကူတစ်ခုခုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျှက် စာရေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုရေးသားလိုက်ပါသည်။
ဘယ်လိုရေးမလဲ (၁).pdf, 92 KB
Permalink Reply by zarchi on December 3, 2012 at 10:33
Permalink Reply by ei kay khaing Win on December 3, 2012 at 11:43
Permalink Reply by koyemyinttun on December 3, 2012 at 13:21
Permalink Reply by 2xfe8d4odf1y4 on December 4, 2012 at 14:06
Permalink Reply by Kyawminthusu on December 4, 2012 at 17:00
Permalink Reply by AYE AYE MAW on December 4, 2012 at 20:25
Permalink Reply by Win Thein on December 5, 2012 at 15:00
WOW! Hi....and........Hello.Your great idea is very useful.... I would like to say" A special thank you" for your sharing about how to write nicely and greatly.... Yes..... If I said honestly, We do need your prefect idea for our future to face which is super great idea with foreigners because English language is super power in the world.. So that I thought it can make everything that what you really want to do in the future....I much appreciated your kindness and compassion........For the all students... Now I have best learned from you... May I haveaquestion please? If you are not too busy, I would like to request that how to think of it to write in english? If you don't mind, Can you please help your perfect idea.... Your truly Win Thein......
Permalink Reply by AungKoU (UMK) on December 5, 2012 at 21:11
Dear Mr. Win Thein,
If you want to write in English, you should read English books first.
Before you think and write, you should read to digestabook.
Permalink Reply by 1nj5cnacrvut2 on December 6, 2012 at 12:24
Permalink Reply by AUNG LWIN SOE on December 6, 2012 at 20:35
Permalink Reply by thanthansoe on December 10, 2012 at 14:12